Uyikhetha njani i-Lab Scanner-Iindaba-VSmile Co., ltd
Uyikhetha njani i-Lab yeWebhu
Ixesha: 2021-01-19 I ngxelo:93
Kubalulekile ukuba uqale uqonde ukuba iskena esithile siza kudityaniswa nesoftware yeCAD kwaye ezinye azenzi njalo. Ngokwesiqhelo unokhetho lweenkqubo ezine ezipheleleyo zamazinyo ze-CAD: Amaphiko wamazinyo, i-3Shape, iLab kunye ne-Exocad.
I-Exocad ikwakhona njengenguqulelo yelebheli yabucala yeenkqubo ezinje ngeZirkon Zahn, Amann Girrbach kunye neNobel Biocare. Isoftware ekuphela kwayo ethengiswa ngokwahlukeneyo kwiskena seelebhu yi-Exocad kuhlobo lwayo olunophawu. Kuzo zonke ezinye izisombululo ze-CAD i-CAD idityaniswe ngokunzulu nesisombululo sesixhobo sokuskena.
IZIKHODI ZELABHU ZIYAHLUKANISEKA KWIMIGAQO ELANDELAYO:
Umthombo wokukhanya, Ukuchaneka, isantya, amandla, ukwakha umgangatho, Ukuskena uhlobo lwefayile, ukusebenza kweSoftware, iifizi zelayisensi yoNyaka, iindleko zizonke.
UMTHOMBO WOKUKHANYA: Uninzi lwezikena zesizukulwana esikhoyo kwimarike zisebenzisa oko kubizwa ngokuba “kukukhanya okucwangcisiweyo” - isibane esiqikelelwayo kwinto yokuskena kwaye sifakwe ziikhamera zebhodi. Bambalwa kakhulu abasasebenzisa ukukhanya kwelaser. Ngelixa bekukho ingxoxo-mpikiswano kule minyaka idlulileyo yokuba yeyiphi iteknoloji “ebhetele” imarike iye yafudukela kwiinkqubo zesikhanyiso esilungisiweyo kuba ivumela ukuskena ukuba kwenzeke kwindawo evulekileyo ngokuchaseneyo nale ivaliweyo, okwenza ukusetyenziswa kube kokusebenziseka ngakumbi- konke ngaphandle kokulalanisa umgangatho wokuskena. Iprojekthi yeenkqubo zokukhanya ezilungisiweyo nokuba kukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okanye okumhlophe.
UKUCHANEKA: Izikena ezikhoyo ziya kuskena kwinqanaba elichanekileyo eliphakathi kwe-4 ne-15 yeemicron. Ngokubanzi okuchaneka ngakumbi kwiskena kubiza kakhulu njengoko izinto eziyimfuneko ekufezekiseni ukuchaneka okukhulu zibiza kakhulu. Imihla ngemihla isithsaba kunye neemfuno zokuvelisa ibhulorho inqanaba elichanekileyo lee-microns ezili-10 lamkelekile. Amanqanaba amakhulu okuchaneka ayanqweneleka xa uskena iimeko zokufaka okanye ukwenza i-arch epheleleyo, ukubuyiswa okunxibelelanisiweyo. Abanye abavelisi bagxila kwinani leemegapixels zeekhamera kwiskena njengomthombo wokuchaneka, kodwa oku kuyinyani kuphela. Uninzi lwee-megapixels ngokuqinisekileyo ziya kubangela ukuba kufakwe idatha eninzi kodwa oku akunakukhokelela ekufumaneni ulwazi oluluncedo, kwaye iya kuhlala icotha inkqubo yokuskena. Izikena ezineekhamera kuluhlu lwe-1.5 ukuya kwi-2.0 ye-megapixel ziya kuvelisa iskena esichanekileyo kuluhlu lwe-4-5 micron.
Isantya:Izikena zokuskena zonke ziyakhawuleza kule mihla. Njengakwimoto, kokukhona uhlawula iskena ngokukhawuleza. Oko kuthethiweyo, umahluko wesantya ukusuka esiphelweni ukuya kwisiphelo esiphakamileyo ufikelela kwimizuzwana embalwa, kunye nokulinganiswa kwesantya ngokubanzi kuboniswa ngendlela engekho ngqiqweni. Oko kuhlala kuchazwa sisantya xa kuskenwa kusetyenziswa isicwangciso sokukhanya "sokukhanya" esivelisa idatha yokuvavanywa okungaphezulu. Inyani yile yokuba xa uskena iinkcukacha kunye nokuchaneka inkqubo ithatha ixesha elide nokuba usebenzisa iskena sini. Ekugqibeleni isantya seskena yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe.
Izakhono:YAKHA UMGANGATHO, IZIQINISEKISO NENKXASO:Izikena ziya kwahluka kwizinto abanokuzikena ngokwazo. Umzekelo, ziziskena ezithile kuphela ezinokuskena ngokulula ubungakanani obupheleleyo be-semiic adjustable articulator. Abanye kuphela baya kuskena ngombala. Kuphela zizinye ezinakho ukukwazi ukuskena ngokuchanekileyo ngakumbi. Kuphela ziinongezo ezivumela imvume yokudlulisa useto oluthile lwe-articulator kwisoftware yeCAD. Xa ukhetha isithwebuli qinisekisa ukuba uwavavanye ngokupheleleyo amandla eskena ngaphaya kweenkqubo ezisemgangathweni.
YAKHA UMGANGATHO, IZIQINISEKISO NENKXASO:Njengazo zonke iimpahla, umgangatho wokwakha weskena unokuba nefuthe 'ekumeleleni nasekuhlaleni ixesha elide. Izikena ezingcono zakhiwe ngezinto ezisemgangathweni ezingcono eziza kuqinisekisa ukusebenza ngokuthembekileyo ekuhambeni kwexesha. Iwaranti esemgangathweni yeskena ngokwesiqhelo unyaka omnye, kodwa iminyaka emibini nangaphezulu kuqhelekile. Okokugqibela, inkxaso ibalulekile kwiskena njengaso nasiphi na isiqwenga setekhnoloji yedijithali, ke qinisekisa ukuba umthengisi weskena sakho unamava kunye nezixhobo zokukhawulezisa ukujongana nayo nayiphi na imiba ojamelana nayo.
UHLOBO LOKUDITYANISWA NE-CAD:Kwinqununu iskena / isoftware yeskena kunye neCAD zizinto ezimbini ezahlukileyo, kodwa abavelisi abaninzi abaziphathi ngaloo ndlela. Zonke iiskena ziza nesoftware enesakhono sokwenza iiprojekthi, ukulawula ukuhamba kokuskena kunye nokulawula ukusebenza kweskena. Kwangelo xesha isoftware yeCAD ihlala ifuneka kuyilo. Isoftware elawula iskena kunye nesoftware yeCAD yahlukile kubuchwephesha kwaye izimele omnye komnye, nangona kunjalo zimbini iindlela zoku.Abanye ababoneleli bezisombululo benza ezi ndidi zimbini zeenkqubo zixhomekeke ngokupheleleyo ukuze ungakwazi ukusebenzisa enye ngaphandle kwenye. Kananjalo baya kwenza icandelo le-CAD ngokufanayo, livaliwe ngokufanelekileyo, i-ecosystem. Ngokwenyani bathengisa iskena kunye nesisombululo seCAD, ngokudibeneyo. 3Imilo kwaye kwi-Lab yimizekelo yeenkqubo ezinjalo.Ngaphandle kwe-exad ye-CAD, ezimele ngokupheleleyo kwizixhobo ze-scanner kunye nesoftware. I-Exocad ithengisa kuphela i-CAD. I-Exocad isebenza kunye noluhlu olubanzi lwabenzi beskena kwaye abo bavelisi basebenza ne-exocad ukuze usebenze ngokupheleleyo usebenze ukuze i-exocad kunye neskena "X" sisebenze kunye ngaphandle komthungo. Ekugqibeleni i-CAD kunye neskena siza kusebenza kwi-100% ngokuzimeleyo omnye komnye.
UKUSEBENZA KWE-SOFTWARE:Ukuthatha ingqalelo kwiimpawu ezibalwe apha ngasentla kunokubakho umohluko ekusebenzeni kwesoftware yeskena. Ezinye ziya kukuvumela ukuba ulawule ngakumbi ukusebenza kweskena kunye neendlela zokuskena, ngokuvumela inqanaba elikhulu lokwenza ngokwezifiso iskena. Isoftware ethile yokuskena iya kukunika amandla amakhulu okusebenza ngokuhamba okungaqhelekanga okanye nokuba uzenzele okwakho; umzekelo xa uqokelela idatha kumazinyo okufakela agqityiweyo ngenjongo yokuqokelela iirekhodi ezizezinye zesigulana.
HLOLA UHLOBO LWEFAYILE:Xa kuqala ukufumana iskena sedatha kuvelisa idatha yokuskena kwiifomathi zomthonyama okanye zokuthengisa kwinto ebizwa ngokuba yi "point point" Nje ukuba kugqitywe ukuskena idatha i "meshed" kwaye kweli nqanaba apho idatha yokuskena inokusetyenziswa ngakumbi nangaphantsi ngumsebenzisi ngaphandle kwesikena esithile / ukuhamba komsebenzi we-CAD. Iinkqubo ezivaliweyo, ezinje nge-3Shape, ziya kususa idatha edityanisiweyo kwifomathi yobunini. Nawuphi na umvavanyi osebenza ne-exocad CAD uya kuvumela umsebenzisi ukuba "abambe" idatha esebenzisa iifom ezivulekileyo ezinje nge-stl, ply okanye obj. Eyona nto ibaluleke kakhulu yokuthatha apha kukuba ukuba ukhetha inkqubo yokuhamba komsebenzi evaliweyo qiniseka ukuba inkqubo ikuvumela ukuba uthumele idatha yedatha kwifayile "evulekileyo" yefayile njengalezi zintathu zikhankanyiweyo (.stl, .ply kunye .obj. ) ukuze idatha yokuskena isetyenziswe kwaye ifikeleleke kumaqabane akho emveliso. Banokukuhlawulisa ngokongezelelweyo.
IMIRHUMO YELAYISENISI YONYAKA:Imirhumo yonyaka yelayisensi yesoftware kunye nesoftware yokuskena kulula ukuyiphepha. Konke okufuneka ukwenze kukuthenga iskena esisebenza kunye ne-exad ye-CAD. Bonke abathengisi bokuqala beskena abasebenza kunye ne-exocad abanamirhumo yonyaka yeskena okanye isoftware yokuskena. Ukuba uthenga i-3Shape, iiWings zamazinyo okanye i-In-Lab, kuba iskena kunye ne-CAD ziyiphakheji enye, uyimali ehlawulwayo yonyaka esebenza kuzo zombini isahlulo seskena kunye nenxalenye yeCAD. Icala elisezantsi koku kukuba ukuba uthatha isigqibo sokungayihlawuli imali yakho iskena siyeke ukusebenza, hayi isoftware yeCAD kuphela. I-Exocad ineendlela ezimbini zokukhetha iiphakheji zesoftware yeCAD kwaye enye yazo imirhumo yelayisensi yonyaka inyanzelekile.
I-COST:Amaxabiso eskena azinzile kweli nqanaba kwindaleko yawo. Ukuzama ukukhupha ixabiso leskena kuphela kuyingxaki nge-3Shape, kwi-Lab kuba iinkqubo zabo zithengiswa njengesisombululo se "scanner kunye ne-CAD", kwaye kunqabile kakhulu kubo ukuba bathengise i-CAD yabo kuphela. Ubuncinci thina andizange ndibabone aba bavelisi bethengisa iskena kuphela. Ukuba ucinga ukuthenga kuphela isithwebuli (ngesoftware yeskena) unokulindela ukuhlawula phakathi kwe- $ 7,000 kunye ne- $ 18,000. Ngaphandle kokuba ufuna nje isithwebuli ukongeza kumthamo wokuskena emva koko uya kufuna isoftware yeCAD. Kwakhona, ukuxabisa i-CAD kunokufumana inkohliso kuxhomekeke kwisisombululo osikhethileyo. Ngayiphi na imeko iindleko ezipheleleyo zotyalo-mali kwisikena kunye nesisombululo se-CAD ziya kusuka kwi- $ 14,000 ukuya kwi- $ 35,000.
Njengoko ubona kukho izinto ezininzi ezinokuqwalaselwa xa ukhetha iskena seelebhu. Oku kuthetha ukuba ukuchaza okona “scanner” kulungile akunakwenzeka kuba naluphi na ukhetho lurhwebo. Qiniseka ukuba ukhetha isisombululo esona silungele iimfuno zakho ngokubanzi. Ngale ndlela ufumana iskena "esona silungileyo" kuwe, njengoko kuchaziwe nguwe.
I-PREV: Iingcebiso xa ufaka imibala yeZirconia epheleleyo
OKULANDELAYO : I-PFM VS Zirconia: Yeyiphi eyona nto ilunge ngakumbi?
Vsmile Mosi2 Isixhobo sokuFunda seZinyo esiSebenzayo
Vsmile Grinder kunye nePolisher